လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကို အသုံးပြု. အကြံပြုချက်များတချို့? - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကို အသုံးပြု. အကြံပြုချက်များတချို့?
လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကို အသုံးပြု. အကြံပြုချက်များတချို့?
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2022-01-11 မူလ:ဆိုက်ကို
ငါတို့သိတယ်Metal Electric Grinderကြိတ်ဆုံနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောအလွန်အံ့သြဖွယ်သေးငယ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်။ ထိုအခါသင်သိပါလားအဲဒါကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ ဒီဆောင်းပါးမှာမိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်လျှပ်စစ်ကြိတ်သမားများ၏နည်းလမ်းမင်းရဲ့ရည်ညွှန်းချက်အတွက်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များစွာရှိသည်အမည်များလျှပ်စစ်ကြိတ်သမားများ,၎င်းတွင်များသောအားဖြင့်ဘောပင်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ has ာန်ရှိပြီးလက်ဖြင့်ကိုင်ထားနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒါကမြန်နှုန်းမြင့်မားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိပါတယ်။ အမြန်နှုန်းသည်တစ်မိနစ်လျှင်ထောင်နှင့်ချီသောတော်လှန်ရေးများသို့ထောင်ပေါင်းများစွာသို့ရောက်သည်။ ဒါပေမဲ့အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်နှေးကွေးသောအမြန်နှုန်းနှေးကွေးခြင်းကြောင့်ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်ခက်ခဲသောအလုပ်များအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ထို့ကြောင့်မိသားစုများ0ယ်ရန်မထောက်ခံပါလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ။
ငါတို့သိတယ်လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းတုန်ခါသွားမည့်မြန်နှုန်းမြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြတ်တောက်ချိန်တွင်အပျက်အစီးများနှင့်အမှုန့်အမြောက်အများကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းအပူချိန်မြင့်တက်လာသောအခါ၎င်းသည်အလုပ်ခွင်ကိုအရည်ပျော်စေရန်, ပြိုကွဲခြင်းသို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မသုံးမီလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိရိယာ,အောက်ပါအကာအကွယ်များကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
1 ။ပလပ်စတစ်မှန်ဘီလူးနှင့်အတူမျက်မှန်ကိုတင်သင့်မျက်နှာနှင့်နှာခေါင်းတံတား fit ။
2 ။သင်ဝယ်ချင်လျှင်ဖုန်မှုန့်နှင့်မီးခိုးများကိုစစ်ထုတ်နိုင်သည့်မျက်နှာဖုံးများ, ဓာတ်ငွေ့မျက်နှာဖုံးကိုအစားထိုးနိုင်သော filter element နှင့်အတူအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
3 ။Woodpiece သည်သစ်သား, ပလပ်စတစ်, သားရေစသည်တို့ဖြစ်သည်ကိုသတိထားပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးအလုပ်ခွင်ကိုလည်ပတ်ရန်သင်၏လွှမ်းမိုးမှုမရှိသောလက်ပေါ်တွင်လက်အိတ်ကို0တ်ဆင်ပါ.
လက်ကိုင်, ဤကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးမျိုးသည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်, ၎င်းသည်ကွေးဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ထောင့်ကြိတ်အတွက်သင့်တော်သည်။
ကွင်းခတ်ထားရန်လိုအပ်သည်, ၎င်းသည် F-shaped Clip ဖြင့်တပ်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်စားပွဲအစွန်းတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ နှင့် bracket ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ထမြောက်နိုင်ပြီးလျှပ်စစ် grinder ကိုကွင်းကွင်းထိပ်တွင်ချိတ်ဆွဲနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရိုးတံတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အတူအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရိုးကိုအပေါ် fixed ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိုမော်တာရိုးတံတစ် ဦး chuck နှင့်အတူနှင့်ပျော့ပျောင်းသောရိုးတံ၏အခြားအဆုံးသည် output ကိုပါဝါအတွက် Chuck နှင့်ကိုက်ညီရန်သံမဏိရိုးတံတပ်ဆင်ထားသည်။ လျှပ်စစ်ကြိတ်သမားများတွင်အသုံးပြုသောဆက်စပ်ပစ္စည်းအများစုသည်တိုတောင်းသောရိုးတံနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရိုးတံ၏အားနည်းချက်မှာတုန်ခါမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဘဝအကန့်အသတ်ရှိသည်။
U-shaped clamp ကိုအသုံးပြုသည်လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကို fixအလျားလိုက်အဆင့်မြင့်ခြေလှမ်းပေါ်တွင်အလျားလိုက်နှင့် output ကိုရိုးတံအလျားလိုက်အလျားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ,သင်လုပ်နိုင်သည်Workpiece ကိုကိုင်ထားပါ။အရာတစ် ဦး grinder ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆင်တူသည်.
Metal Electric Grinder လျှပ်စစ်ကြိတ်သူများ၏အမည်များ လျှပ်စစ်ကြိတ်သမားများ၏နည်းလမ်း အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်စက် လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိရိယာ လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ပြုပြင်ခြင်း အဆိုပါလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိုမော်တာရိုးတံ လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကို fix